Côte d’Ivoire: Iza no namono ireo vehivavy mpanao fihetsiketsehana miisa fito ? (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2018 3:04 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, Français, Nederlands, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
(Marihina fa tamin'ny 8 Martsa 2011 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ao anatin'ny fitantarana manokana ny korontana tao Côte d'Ivoire taona 2011 ity lahatsoratra ity.
Lasa nivadika ho nahery vaika kokoa ny fifandonana teo amin'ireo mpanohana ny mpitarika mpanohitra tao Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo sy Alassane Ouattara. Samy nilaza ireo mpanao politika roa ireo fa nandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny volana Novambra 2010 izy ireo tamin'ny 3 Desambra 2011.
Nanao fihetsiketsehana manohitra ny toe-draharaha politika ny vehivavy Ivoariana nanomboka ny 25 Febroary 2011.
Niafara tamin'ny ra mandriaka ny Alakamisy 3 Martsa 2011 ilay noheverina fa ho diabe milamina. Vehivavy miisa fito no voalaza fa maty voatifitry ny tafi-piarovam-pirenen'i Gbagbo nandritra ny fihetsiketseham-behivavy izay nokarakaraina tao Abobo, tanàndehibe mpanohana an'i Ouattara, ao an-drenivohitra ara-toekarenan'i Abidjan .
Vetivety dia niparitaka tao amin'ny aterineto ny lahatsarin'ny fitifirana tamin'ny alàlan'ny tolotra fizarana lahatsary Youtube.
Namoaka lahatsary naharitra fito minitra ilay mpisera Youtube Dreamdav, izay nahitàna ireo vehivavy tsy misy fitaovam-piadiana nihirahira hoe “ADO” (Alassane Dramane Ouattara), raha tampoka teo (tamin'ny 3:32 ora), nitifitra ny mpanao fihetsiketsehana ny fiaran'ny polisim-pirenena, ary nanaparitaka azy ireo ka voatery nitady fialofana izy ireo noho izany.
Nampiseho ny zava-tranga nitovy tamin'izany ny lahatsary hafa navoakan'ny olon-tsotra (TANDREMO:MAMPIHORONKODITRA).
Mampiseho ny fisavorovoroana segondra vitsy taorian'ny tifi-basy ity lahatsary nalain'ny mpanao fihetsiketsehana iray tao anaty vahoaka ity izay navoakan'i SuperDjatou :
Mampiseho faty efatra mitsirara amin'ny tany ny lahatsary iray hafa:
Anisan'ireo fihetseham-po nozarain'ny mpisera Ivoariana sy ny hafa ny alahelo sy ny hatezerana taorian'ny tifitra. Ireto ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny tambajotra sosialy famahanana bilaogy madinika Twitter, izay nalefa tao amin'ny tenirohy nampiasaina nandritra ny korontana, #civ2010 .
Raha namaly ny mpisera Twitter iray hafa i @KDGF2505 dia nilaza hoe:
Ireo tery saina no mamono vehivavy tsy manan-tsiny … mihevitra ve ianao fa mety hampitsahatra ny fankahalana ny fomba toy izany?
Nanome anarana ireo vehivavy maty miisa 7 hoe “maritiora” i @SenamBeheton, mpisera Twitter iray avy any Bénin:
Hadisoana lehibe izay ho anenenan'i Gbagbo ny famonoana tao Abobo (maritiora miisa 8) .
Mampahatsiahy antsika i @kanazan fa ho avy tsy ho ela ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ary manontany tena hoe:
Ahoana no hankalazantsika ny 8 Martsa any Côte d'Ivoire? novonoina ny vehivavy ..
Iza no Diso
Tao amin'ny lahatsoratra iray izay navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny gazety Frantsay mpivoaka isan'andro Liberation, nilaza ny loharanom-baovao iray fa tao anaty fiara 4 × 4 ireo olona nitifitra ireo vehivavy. Rehefa nanontaniana tamin'ny alàlan'ny mailaka ilay mpanao gazety nanoratra ny lahatsoratra, Thomas Hofnung, dia nanamafy izy fa azo antoka ny loharanom-baovao.
Loza tsinahy izany araka ny fijoroana vavolombelona iray hafa avy amin'ny loharanom-baovao azo avy amin'ny tafika ho an'ny mpanao gazetin'ny Reuters :
Ny loharanom-baovao iray avy amin'ny tafika no nanamafy ilay fitifirana ary nanazava fa noho ny “fahasosoran'ny mpitandro filaminana taorian'ny fifandonana teo aloha” no niteraka ny loza.
Nozaraina tao amin'ny pejin'ny mpankafy an'i Laurent Gbagbo tao amin'ny tambajotra sosialy Facebook ny filazana hafa momba ny zava-nitranga. Araka ny filazan'izany loharanom-baovao izany, novonoin'ireo mpikomy akaiky ny Praiminisitra Guillaume Soro, Forces Nouvelles (Hery Vaovao) mahatoky ny filoha Ouattara ireo vehivavy ireo:
Notifirin'ireo andiana mpikomy ireo vehivavy avy ao amin'ny kaominina Abobo izay nanapa-kevitra ny hanao diabe omaly (3 martsa 2011) maraina.
Nanameloka ny misiterin'ny ‘Kômandô tsy hita maso‘ – vondron-dehilahy nisaro-tava mpanohana an'i Ouattara – tamin'ny vono an'olona ny Notre Voie, iray amin'ireo gazety lehibe mpivoaka isan'andro ao Côte d'Ivoire. Tao amin'ny lohatenin'ny pejy voalohany izay mazava tsara dia hoy ilay gazety: ‘”Namono Vehivavy Miisa Fito Ny Kômandô tsy Hita Maso”.
Notre Voie laharana faha 3822, Zoma 04 Martsa 2011
Nalefa tao amin'ny fahitalavitra nasionaly RTI ihany koa ny fandavana: nilaza ny mpitondratenin'ny tafika ao Côte d'Ivoire, Kôlônely Mazaoro Hilaire Babri Gohourou hoe:
Nohidiana tao amin'ny foibeny tao Abobo ny vondro-tafika.
Nanamafy ity loharanom-baovao ity ny DjibiTV , fantsom-pahitalavitra antserasera izay malaza ho fananan'ny iray amin'ireo zanakavavin'i Laurent Gbagbo, Marie Patrice Gbagbo :
Notifirin'ity herin'ny maizina ity [ilay ‘kômandô tsy hita maso’] ireo vehivavy izay nanao diabe am-pilaminana ka nahafaty olona am-polony. Nitranga tany Abobo izany izay misy ny foiben'ny mpikomy Alassane ao Ouattara, ary namonoana sy nanapahan-tenda ny vahoaka milamina.